Momba anay - AIKA Apparel Co., Ltd.
AIKA nohafohezina ho AK, ny fanombohana antsika dia ny famelana ny olona eto amin'izao tontolo izao hifanaja sy hifankatia kokoa noho ny fahasalamana, ary avy eo hampiroborobo ny fanatanjahantena nasionaly, ka lasa tompon'ny fanatanjahantena ny tsirairay!
AIKA SPORTSWEAR dia mpanamboatra fitafiana matihanina manompo mpamatsy fahasalamana manerantany. Manam-pahaizana manokana izahay amin'ny fanaovana tolotra manokana amin'ny akanjo fanatanjahan-tena, akanjo yoga, akanjo fanaovana fanatanjahan-tena, fiofanana sy akanjo jogging, fitafiana mahazatra. Ny fampifangaroana ny fiasa, ny estetika ary ny fitaovana fampisehoana dia eo an-tsoratry ny ho avin'ny hatsaran-tarehy. Namorona maodely mahomby izay mamela ny mpanjifanay hahazo akanjo faran'izay tsara tsy misy vidiny lafo.
Tamin'ny 2008, nanangana orinasa fanatanjahan-tena mitondra ny anarana AIKA izahay. Tamin'ny fiantombohan'ny fananganana dia tsy nanana traikefa tamin'ny famokarana izahay, saingy taorian'ny nanohizanay nianatra sy nandinika ny fahaizan'ireo marika fanatanjahan-tena malaza sasany, dia nahafehy tsikelikely ny asa-tanana fanjairana manokana. Noho izany antony izany dia nanolotra milina fanjairana manokana maro izahay, nahitana fanjaitra efatra, enina enina, zaitra, sidecar, sns, mba hahafahanay mifampiraharaha amina mora ny fepetra takiana manokana amin'ny mpanjifa maro amin'ny fotoana manaraka.
Tamin'ny taona 2010, nanomboka nifantina tsimoramora ireo mpiasa manjaitra tena tsara izahay ho toy ny hery lehibe amin'ny fifehezana ny kalitaon'ny famokarana atrikasa, ary nanome azy ireo karama ambony mba hahazoana antoka fa ny kalitaon'ny vokarin'ny mpanjifanay dia afaka manana antoka famokarana mifanaraka amin'izany. Mandritra izany fotoana izany, momba ny fanaraha-maso QC ny vokatra vita, dia ataontsika matotra foana ny mpanjifa tsirairay mba hahazoana antoka fa afaka mivarotra tonga lafatra ny vokatr'izy ireo.
Tamin'ny 2015, rehefa matotra amin'ny haitao famokarana akanjo fanatanjahan-tena izahay dia nanomboka nanangana sampana varotra vahiny ary nanomboka nandresy ny tsenanay ampitan-dranomasina. Taorian'ny fanangonana traikefa nandritra ny roa taona dia notohanan'ny mpanjifa ampitan-dranomasina maro izahay, indrindra ny fanekena sy ny fankasitrahana ny kalitaonay, izay nanome anay fahatokisana lehibe koa ny tsena any ivelany.
Nanomboka ny taona 2019, nanana fahaiza-manao famokarana matanjaka sy malefaka avo be izahay. Manana fahaizana matanjaka koa izahay hanaiky kaomandy kely. Amin'izao fotoana izao dia manana famoahana 50 000-100,000 isam-bolana Izahay koa miasa akaiky miaraka amin'ireo orinasa 10 hafa. Ny mpiasanay QC dia afaka manisa ny dingana rehetra amin'ny famokarana raha atao any ivelany ny famokarana.
ny kolontsain'ny orinasa lehibe telo.
nanangana ny rafitray manokana izahay handraketana ny traikefa rehetra tamin'ny taonantsika sy taona maro nanaovana antsipiriany izay hitazomana hatrany ny saina ho kalitao amin'ireo zavatra niainana taloha ireo. Izahay koa manana ny ekipanay hijerena manokana mba hanao fanaraha-maso kalitao 100% ary hahazoana antoka fa voaravaka tsara ny kofehy rehetra, ary ny refy rehetra dia azo atao ao anaty fandeferana, ny lamba rehetra dia tsy misy olana mihintsy sns alohan'ny fandefasana.
Manana ny ekipan'ny departemantan'ny varotra ivelany matihanina izahay, afaka mifandray amin'ny mpanjifa mivantana amin'ny teny anglisy amin'ny alàlan'ny mailaka na telefaona. Izy rehetra dia mpamorona zokiolona amin'ny akanjo fanatanjahan-tena ary mahalala antsipiriany momba ny akanjo, ny fifandraisana dia lasa mora sy mahomby kokoa. Ka mila milaza aminay izay ilainao fotsiny ianao, dia hiaraka aminao eto daholo izahay!
Ny santionany dia azo vita ao anatin'ny 7-10 andro fiasana. Ny entana be dia be dia afaka vita ao anatin'ny 20-25 andro fiasana. Ary manana ny mpampita azy matihanina manokana koa izahay, afaka manome anao ny fomba fitaterana sambo ary azo antoka fa azo antoka sy haingana ny entana. mandefa.
Adiresy: Efitra A, gorodona 3, tranobe E, Faritra indostrialy Yongqin, Binhai Avenue, Humen Town, Dongguan
Matokia ny asanay, azonay atao ny manolotra anao izay tadiavinao amin'ny fo manontolo!
Miova ny eritreritry ny mpanamory, Miova ny endrika sy ny lamba, tsy miova mihitsy ny kalitaonay! Aika akanjo, Safidinao tsara!
Vokatra bebe kokoa!